Akụkọ - Kedu ihe kpatara anyị ji ahọrọ nfuli ntụtụ nnukwu ntụtụ
Kedu ihe kpatara anyị ji ahọrọ mgbapụta ntụtụ ntụtụ ntụtụ
A na-eji nfuli sirinji na-eduzi mmiri ọmụmụ ihe n'ọtụtụ ebe na microfluidics, electrospinning voltaji dị elu, kemịkal dị mma, mmanụ ala, biopharmaceuticals, gburugburu ebe obibi, na ụlọ ọrụ nyocha sayensị na mpaghara ndị ọzọ.
Site n'ịbawanye ngwa ngwa nke kemịkal na -asọba, ọnọdụ nke usoro mmeghachi omume na -adịwanye mgbagwoju anya, ụdị ihe a ga -ebuga na -adịwanyewanye. Mgbe ị na -eji nfuli mgbali elu dị elu nke ọdịnala, n'ihi ụdịdị ya, a na -emetọ valvụ inlet na mpụta, anaghị arụ ọrụ nke ọma, na -ebute mmiri na -akwụghị chịm. N'otu oge ahụ, mgbe ị na-ezute ihe mmiri mmiri na-emebi emebi, valvụ nke otu ụzọ na-esiri ike imechi nke ọma wee funahụ ọrụ ya, nke na-egbochi njem nke ihe viscous. Iji mee mgbanwe maka ngwa ngwa nke ngwa kemịkalụ na -asọba, gbasaa ngwa ngwa, ma bufee ụdị akụrụngwa dị iche iche, ka ndị ahịa jiri ngwa ọrụ ndị ọzọ dị mma, chekwaa oge, akụrụngwa, na ike mmadụ, Mmiri mmiri ndu. ewepụtala mgbapụta sirinji ọhụrụ dị elu.
Lead Lead Fluid wepụtara mgbapụta sirinji mgbali elu dị elu-TGD01 taa. Mgbapụta sirinji dị elu nwere ike ijide sirinji (sirinji siri ike gas) nke nkọwa 0,5μl ~ 140ml. Nnukwu mgbali dị mma maka nnyefe nke ihe ọ liụ liụ na -aba n'anya, nnwale ihe nrụpụta kemịkalụ, ọgwụ na injinị kemịkal. Na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
TGD01 Lead Fluid bụ mgbapụta sirinji nwere nnukwu ọwa nwere ọrụ ihuenyo mmetụ LCD dị elu. Ọ na -ebunye ihe karịrị 200lbs (91kg) ahịrị kwụ n'ahịrị n'ọtụtụ ọnụego na -akwado ma na -akwado ụdị ọrụ ise dị ka inye na ịwepụ. Mkparịta ụka RS485, na-akwado ụkpụrụ Modbus, ntinye ike dị iche iche, dị mma maka nnyefe mmiri dị elu (gụnyere viscosity dị elu).
• Ọnụego ziri ezi na nke ọma
• Enwere ike ibunye ya sirinji igwe anaghị agba nchara maka nnukwu nrụgide ma ọ bụ nnyefe mmiri viscous
• Izi ezi na nkwụsi ike nke ntụtụ mmiri mmiri
• Ọrụ ebe nchekwa gbadara agbada
• Enwere ike ịrụ ọrụ mmemme dị mfe ma dị mgbagwoju anya na -enweghị kọmputa
• Nnukwu ịgba ntụtụ
• Mgbapu mmiri mmiri nke ukwuu
• Nnukwu mmiri mmiri viscosity
• Micro elu nkenke injection
• Gbanye n'ime akpa mgbali elu
TGD01 dabara maka sirinji 0.5ul-140ml, ọsọ ahịrị 1μm/min～190mm/nkeji
• Ogo ntụtụ: 0.5μl ～ 140ml
• Oke iyi: 3.06pl/min sy 0.5μl sirinji ～ 5 215ml/min (140ml sirinji)
• Ọnọdụ ọrụ tinye, wepụ, nye /wepụ, wepu /nye, ọnọdụ na -aga n'ihu
• Ọwa: 1
• Mgbaji nke mgbapụta: 140mm
• Pusher na -aga n'ihu n'otu ụzọ ọ bụla: 0.156μm/μstep
• Ọsọ kwụ ọtọ: 1μm/min ～ 190mm/min
• Nhazi njem kwụ ọtọ: njehie ± 35 0.35% (＞ 30% nke mgbapụta mgbapụta)
• Nrụgide kachasị: 91kg （100% na -akwagide）
• Usoro ịtụgharị: 1% ～ 100% enwere ike idozi ya
• Nhọrọ ntụtụ: ndị nrụpụtara n'ime wuru n'ime, sirinji isi ịhọrọ; Nwere ike iji sirinji omenala, nha sirinji ntinye ozugbo na dayameta
• Nhazi mmeba: site na usoro nhazi iji nweta oke mmiri mmiri ka mma
• Ngosipụta: LCD nke anụ ọhịa 4.3 nwere ngosipụta ihuenyo yana olu mmịnye ọbara, olu mmiri ihe fọdụrụ, asọba, ntụzịaka ọrụ, nkọwapụta sirinji, wdg
• Ọnọdụ ihuenyo mmetụ ọrụ na bọtịnụ
• Nchekwa na-apụ apụ: na-echekwa oke ọsọ na-akpaghị aka
• Nkwukọrịta nkwurịta okwu: RS485, Modbus Protocol
• Njikwa mpụga: Njikwa mgbama mpụga na -amalite ma kwụsị, mmepụta mgbama ọkwa
• Ịnye ọkụ: AC100-240V ， 50-60Hz
• Ebe ọrụ: okpomọkụ 5 ～ 40 ， humidity Oyi iru mmiri <80%
• Akụkụ: 305 × 222 × 190 (mm)
• IP ọkwa: IP31
• Ihe eji eme akwa: ihe nchara mpempe akwụkwọ
• Ibu: 6.6kg